'संविधान मधेशी जनताको अनुकुल छैन, कालो झण्डा गाड्नुपर्छ'
वि.सं. २०७२ को संविधानले शोषित, पीडित, उपेक्षित, मधेशी, आदीवाशी, जनताजति, महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई समेट्न सकेको छैन । उनीहरुको पक्षमा छैन यो संविधान ।
काे-काे छन् संविधान कमजोर पार्ने खेलमा ?
संविधान दिवस मनाउन गरिएकाे तामझाम र 'उर्दी'ले सरकारी अक्षमता त छाेपिएला, तर संविधानमाथि शुरु भएकाे प्रहार राेकिएला ? मिर्गौलाको उपचारका लागि ५–२० भदौमा सिङ्गापुरमा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिकन्फ्रेन्सबाट दुई पटक मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरे । ...
चार वर्ष अघि यसरी आएकाे थियाे जनताको संविधान
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जनता आफैंले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका मुद्दालाई संस्थागत गरेको छ। नेपाल...
हामीले धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेका थियौं । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्कीहरु व्यहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर...
संविधानको ४ वर्ष : जनतामा उत्साह बढेन, चुनौती कायमै
annapurnapost.com . ९ महीना अघि
काठमाडौं : जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसद्भित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस...
imagekhabar.com . ९ महीना अघि
संविधानको ४ वर्ष: जनतामा उत्साह बढेन, चुनौती कायमै
काठमाडौं । जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसद्भित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस...
संविधानको इमान्दार पालना गरेमात्र कानूनी शासन चल्छ
संविधान दिवस मनाउन जारी भएको सरकारी उर्दि र सामाजिक सञ्जालमा सो उर्दिलाई लिएर भएको व्यापक विरोधले आम जनताको यो सरकारप्रतिको निराशा र आक्रोश थाहा पाउन सकिन्छ। संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन भूमिका ...
संविधान राजनीतिक अस्त्र होइन
वर्तमान विगतको जगमा उभिएको हुन्छ । आज हामी जे जस्ता अधिकार उपभोग गरिरहेका छौं, त्यसको आधार चार वर्षअघि असहज अवस्थाका बीच ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान हो । संविधान बन्न नदिन आन्त...
सरकारी पक्षका नेता, मन्त्री नै संविधान दिवस नमनाउने, कसरी गर्ने दिपावली? : राजेन्द्र महतो
setopati.com . ९ महीना अघि
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का सांसद राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार प्रतिनिधिसभा संसदमा बोल्दै महतोले सबै जनताले संविधान दिवस ...